Ezinye iGoogle Pixel 3 kunye nePixel 3 XL azigcini iifoto abazithathayo | I-Androidsis
Ezinye iGoogle Pixel 3 kunye nePixel 3 XL azigcini iifoto abazithathayo
Ngaphandle kwenani elikhulu lovavanyo olwenziwa ngabavelisi kwiitheminali ngaphambi kokuba bafike kwintengiso, akunakwenzeka ukuba uqikelele izakuziphatha njani xa uluntu ngokubanzi luqala ukunxibelelana nayo. Kunyaka ophelileyo, uninzi lweengxaki zaziswa yiGoogle Pixel 2 kunye neGoogle Pixe 2 XL. Kulo nyaka, kubonakala ngathi imbali iyaziphinda.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, sikwazise ngeengxaki ze I-Google Pixel 3 XL kwimisebenzi emininzi, Ngaphandle koko iingxaki zescreen nezesithethi ekwaboniswa ezinye zeemodeli zesigaba sesithathu soluhlu lwePixel kaGoogle. Ngoku kukujika kwengxaki ebaluleke ngakumbi, kwaye oko kukuthi ngokwenani elikhulu labasebenzisi, iifoto abazithathayo azigcinwa kwisixhobo.
Ekuqaleni kunokubonakala ngathi kuyaphazamisa, kodwa ukuba sithathela ingqalelo into yokuba i-smartphone ibe sisixhobo sodwa kubasebenzisi abaninzi xa kufikwa kumba gcina elona xesha lixabisekileyo, Ingxaki inokubangela ngaphezulu kwentloko, kwaye ayisiyomsebenzisi kuphela, kodwa ikwayiyo neGoogle.
Njengoko sinokufunda kwimisonto eyahlukeneyo yeReddit, iGoogle Pixel 3, iPixel 3 XL, iPixel 2 kunye nePixel 2 XL baneengxaki xa kuziwaUkugcina iifoto xa zithathiwe. Kuyabonakala ukuba le ngxaki ibonakala xa uthatha umfanekiso kwaye utshintshela ngokukhawuleza kolunye usetyenziso. Abanye abasebenzisi bathi umfanekiso omncinci ubonisiwe kwigalari yabo, kodwa xa ucofa kuyo, uyanyamalala ngokupheleleyo kwisiphelo sendlela.
Abanye abasebenzisi bathi iifoto aziveli kwasekuqaleni kwiitheminali zabo, kodwa kunoko bayayenza emva kwemizuzu benziwe. Nokuba siyintoni na isizathu, kuyacaca ukuba i-smartphone ayinakho ukubonisa olu hlobo lwengxaki, kungasathethwa kangako kwii-terminals zikaGoogle, ophetheyo ekuphuhliseni inkqubo yokusebenza elawula ii-terminals zayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Ezinye iGoogle Pixel 3 kunye nePixel 3 XL azigcini iifoto abazithathayo
Ukudlala ngokuzenzekelayo kwamanqaku elizwi kungekudala kuza kuWhatsApp
Itekhnoloji entsha ne-4 emitsha apho i-Samsung iyakususa inotshi kwintengiso